Madaxweynaha Puntland oo la filayo in uu tago magaalo xeebeedka Qandala - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo la filayo in uu tago magaalo xeebeedka Qandala
January 9, 2017 Abdi Omar Bile Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha dowladda Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali. [Sawirka: xafiiska warfaafinta madaxtooyada Puntland]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa saacadaha soo socda la filayaa in uu tago magaalo xeebeedka Qandala, wuxuuna noqonayaa Madaxweynihii kowaad ee Puntland oo taga halkaas ku dhawaad 18-sanno oo Puntland jirtay.
Inta uu ku guda jiro safarkiisa, Madaxweyne Cabdiweli ayaa kulamo la yeelan doona masuuliyiinta dowladda iyo saraakiisha ammaanka ee jooga magaalada.
Bishii lasoo dhaafay, ciidamada Puntland ayaa dib uga qabsaday magaalada Qandala maleeshiyada ISIS, kuwaasoo qabsaday dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay ee Oktoobar.
March 24, 2017 Madaxweynaha Puntland oo sheegay in la jabiyay maleeshiyada ISIS ee joogta gudaha Puntland
November 2, 2016 Maraakiib dagaal oo aan la aqoon cida leh oo duqeeyay saldhigyada maleeshiyada taageersan ISIS ee magaalo xeebeedka Qandala
Ciidamada ammaanka Puntland oo magaalada Gaalkacyo ka bilaabay howlgal ammaanka lagu adkaynayo
Minneapolis-(Puntland Mirror) Murashaxa madaxweynaha xisbiga Jamhuuriga ee Maraykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu booqdo gobolka Minnesota maanta oo Jimce ah. Trump ayaa la filayaa in uusan soo dhaweyn fiican ka heli doonin bulshada Soomaalida [...]
Al-Shabaab oo toogasho ku fulisay saddex nin oo ay ku eedaysay jaajuusnimo
Muqdisho-(Puntland Mirror) Kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay meel fagaare ah ku toogatay saddex nin oo ay ku eedaysay in ay jaajuusyo u ahaayeen milatariga Kenya iyo haayada sirdoonka Maraykanka ee CIA-da. Nimanka [...]
Waqooyiga Kuuriya oo tijaabisay gantaalada lidka maraakiibta
Pyongyang-(Puntland Mirror) Waqooyiga Kuuriya ayaa dhanka bariga ee badeeda ku tijaabisay dhowr gantaal oo kuwa lidka maraakiibta ah, sida ay sheegeen milatariga Koonfur Kuuriya oo deris la ah Waqooyiga Kuuriya. Masuuliyiinta ayaa sheegay in gantalkaa [...]